CROISADE DES COEURS PURS - Fihavaozana Karismatika katôlika fiombonana
Home »CROISADE DES COEURS PURS
« Ady ho amin’ny fahamasinan’ny tanora»
Teo amin’ny tantaran’ny Fiangonana Katolika dia efa re ombieny ombieny ny teny hoe « croisade ». Tamin’ny taonjato faha 12 sy faha 13 dia babon’ny finoana silamo ny tanànan’ny Jerosalema. Ka mba hamerenana indray an’io tanàna masina io ho an’ny Fiangonana, noho ireo soatoavina ara-pinoana sy ara-tantara raiketiny, dia natsangana teo anivon’ny Fiangonana Katolika ny fivondronan’ny kristianina na « croisade ». Ny Papa sy ireo tompon’andraikitra rehetra teo amin’ny Fiangonana tamin’izany andro izany, eny fa na dia ireo Olomasina ihany koa aza, dia namporisika ireo miaramilan’ny finoana kristianina, mbamin’ny ankizy, mba handia tany lavitra sy hiady mba hambaboana sy hahazoana indray an’ny Jerosalema Tanàna Masina. Tsy mbola nisy hetsika sy ady masina toa izany teo amin’ny tantaran’ny Fiangonana.
Ankehitriny, maniry ny hampiarana io herim-panahy lalim-paka nentin’ny « croisade » io eo amin’ny tanora karismatikan’ny « FIOMBONANA » rehetra aho amin’ny alalan’ny fanokafana iraka (apostolat) eo anivon’ireo vondrombavaka misy antsika, ao anatin’ny Fiangonana Katolika eto Madagasikara. Ny fihaonambe nasionaly natrehantsika tany Morondava (tamin’ny taona 2013) no nahazoantsika ny teny faneva hoe : « Ho voninahitra ho an’ny Raiko raha mamoa be ianareo sy tonga mpianatro » (Jo 15, 8). Ny vondrombavaka rehetra sy isika tsirairay avy dia samy voaantso hitondra vokatra avy amin’ny fahamasinana. Tsara ny mampatsiahy fa ny Fihavaozana Karismatika dia làlana iray hahazoana ny fahasovan’Andriamanitra ao anatin’ny Fiangonana mba hamohazana sy hanavaozana ny firedaredana sy ny fahatongavan-tsaina hamaliana ilay antso ho amin’ny fahamasinana. Tsy mifidy saranga na tavan’olona io antso io fa ny olona rehetra no voakasik’izany : ny ankizy, ny tanora, ny olon-dehibe, ny efa nahazoazo taona, ny manam-bady sy ny mpitovo, ets.
Ho an’ny karismatika dia ny fanoloran-tena manontolo amin’i Jesoa Kristy sy ny fandraisana Azy ho Tompo sy Mpamonjy (Rom 12, 1-3) no manamarika ny fiainany manontolo. Maro isan-karazany ny valin-teny hirosoana amin’izany fanoloran-tena izany, fa ny lehibe indrindra amin’izy ireo dia ny fiheverana amin’ny fomba matotra ny fahasoavana noraisina tamin’ny Batemy, izay havaozina mandritra ny fandraisana ny hafenoan’ny Fanahy Masina (effusion). Ny fiainana karismatika dia fiainana anaty fanomezan-toky lalim-paka, miredareda sy entitra. Ny « effusion » dia misarika antsika hiaina anaty fanekena natoraly ny sitrapon’Andriamanitra sy fanarahana ny didiny. Ny fiezahana amim-paharetana miaina ao anatin’izany toetra izany no miteraka ny voaloham-bokatry ny fahamasinana. Aoka isika tsy hatahotra ny teny hoe « Fahamasinana ». Raha toa ka ny vondrom-bavaka misy antsika tsirairay avy no tonga sekolin’ny fahamasinana, dia inoako fa ho zava-dehibe sy ho sarobidy loatra ho an’ny Fiangonana izany.
Amin’izao fotoana izao dia miantso anareo tanora karismatika lahy sy vavy aho. Handeha hialana ny toetra rehetra mifandraika amin’ny tsy fahombiazana, fahakamoana ara-panahy, fahakiviana sy izay toetoetry ny anti-dahy tsy mahefa na inona na inona intsony. Samia mitafy indray ny fahamasinan’i Kristy mandritra ny androm-piainany. Isan’ny hatsarana tsy maintsy hatrehana ao anatin’izany ny fitandroana ny FAHADIOVAM-PO sy ny FAHADIOVAM-PANAHY. Manana anjara toerana lehibe ao anatin’ny fiainam-panahy ireo, ary ny fananana azy sy ny fiainana azy maharitra no ahafahana manambara fa resin’ny fiainam-panahy ny fiainan’izao tontolo izao. Entina mitory ihany koa ny fandresen’ny fanahy amin’ny nofo ka ahafahana mitory ilay tontolo vaovao dia ny Fanjakan’i Kristy.
Fantatra tokoa fa sarotra ny mitandro izany fahadiovana izany satria mitaky ezaka sy fandavan-tena. Toa miendrika ho tendrombohitra izay sarotra ananihana ka raha ny finiavana ihany dia tsy ho ampy ahatratrarana ny tanjona. Ilana ezaka mitohy sy fanaovana asa famolahan-tena miverimberina eo amin’ny fiainana andavan’andro izany. Tsapako fa mandrisika antsika hanantanteraka hetsika lehibe ho an’ny Fanahy Masina sy ho antsika ihany koa ny Raintsika izay miahy antsika.
Tsikaritra ankehitriny fa marary sy maratra nohon’ny fanahin’ny fahalotoana ny tanora Malagasy. Ianareo tanora karismatika indrindra no andrandraina hitsangana sy hanohitra izany toe-java-misy izany. Tsy tongatonga ho azy ny fananarana sy ny fanehoana alahelo nataon’i Masina Maria tamin’ireo fisehoany tany Anosivolakely ka nampitandremany ny vahoaka Malagasy ny amin’ny :
Araka izany dia misy tokoa ireo olana ireo eo amin’ny mponina Malagasy ary eo amin’ny Fiangonana Katolika ihany koa. Amin’ny fomba ahoana moa no hanovantsika sy hitarihantsika ny tanora raha tsy amin’ny alalan’ny oha-piainana entintsika miaina ao anatin’ny fahadiovana, fahamaotinana sy lavitry ny karazana filan-dratsin’ny nofo rehetra ?
Manasa antsika tanora karismatika katolika indrindra ary aho mba hiditra anatin’ny CROISADE vaovao mba haka ilay « Jerosalema vaovao », dia tsy inona fa ny famerenana indray ilay fahadiovana sy fahamaotinana izay very mba hivelomana indray ao anatin’ny fahamasinana, fahadiovana, fahamendrehana ny maha tempolin’ny Fanahy Masina anareo. Izany no « apostolat » na iraka sy ady masina hatrehantsika miaraka amin’izao vanim-potoana iainantsika izao, dia ny Croisade des COEURS PURS izay miantoraka amin’Andriamanitra Fanahy Masina!!!
Ity « croisade » ity dia làlana misy ambaratongany izay arahan’ady. Fanasana ho mpianatr’i Kristy amin’ny fomba entitra izy ity. Amin’ny alalan’ny iraka « apostolat de la croisade des cœurs purs » no hiheverana hanasitranana ny fomba fijery ny fitiavana izay iantsoan’Andriamanitra ny olona rehetra, indrindra ireo mikasa sy maniry hanorina tokantrano vanona sy araka ny sitrapon’Andriamanitra. Izao tontolo izao mihitsy no manao izay hahajamba antsika amin’ny fomba fijery araka ny nofo sy lavitra ny hevitra ara-panahin’ny fitiavana. I Kristy kosa izay làlana sy fahamarinana ary fiainana dia manasa antsika hizotra amin’ny làlam-piainana hafa. Izy ilay mahafantatra amin’ny antsipiriany ny fon’olombelona sy izay iriany, Izy no te-hanolotra fiadanana ho antsika ; fiadanana mihoatra lavitra noho ireo fahafinaretan’ny nofo izay mandalo fotsiny ihany sy miteraka ratra.
Ny « croisade des cœurs purs » dia manasa ny tanora karismatika sy ny katolika rehetra mba ho feno fankaherezana sy hanohitra ny fomba fiaina rehetra mifanohitra amin’ireo soatoavin’ny Vaovao Mahafaly. « Sambatra izay madio fo fa hahita an’Andriamanitra izy. » (Mt 5, 1-13). Amin’ny alalan’ny fijoroana vavolombelona ataonay no irianay hankaherezana sy hanamafisana ireo izay mbola marefo sy maniry hanana fiainam-baovao ary hifaly amin’izany fiainam-baovao izany, noho ny amin’i Kristy sy ny herin’ny Fanahiny Masina. Ity iraka imasoanay ity no entinay hijoroana ho vavolombelon’ny fahamendrehan’ny fitiavan’ny zanak’olombelona, ny maha olombelona azy, ny fifandraisan’ny lahy sy ny vavy, ny fahatsaran’ny fitiavana madio, ny fifanajana eo amin’ny mpivady, ny fanoloran-tenan’ny mpino amin’ny maha tempolin’ny Fanahy Masina azy.
Hapetrakay feno eo am-pelatanan’i Fo madion’i Maria Imakole ity « CROISADE » ity, izy ilay tsara indrindra, ilay madio indrindra amin’ny olombelona rehetra : sady Virjiny no Reny, Imakole mandrakizay.
Ny fivondronan’ny « fo madio » (mouvement des cœurs purs) dia tafiditra ao anatin’ny Ministeran’ny Fanentanana. Hisy ny ambaratonga samihafa izay hiarahantsika ry tanora, amin’ny alalanareo izay itoeran’ny fomba fijery vaovao sy manana ny idealy entinareo miaina no hitrandrahantsika ny antso vaovao ataon’ny Fanahy Masina ao anatin’izao fanoloran-tena sy iraka izao. Ho marika hanamarihana izao fandrosoana izao, dia manasa anareo tanora karismatika aho mba hiombona, hivondrona, hazoto ary hanolo-tena tanteraka. Miantso antsika ny Fanahy ka aoka isika hivonona sy hitafy hery avy amin’Andriamanitra.